Mpiara-miasa IGLTA miaraka amin'i Copenhagen 2021 manohana WorldPride sy EuroGames
Home » LGBTQ » Mpiara-miasa IGLTA miaraka amin'i Copenhagen 2021 manohana WorldPride sy EuroGames
Ny fizahan-tany LGBTQ + sy ny mpandraharaha dia hampifandraisina amin'ny Copenhagen 2021 ho avy amin'ny alàlan'ny tamba-jotra IGLTA + Travel Association. Ity hetsika ity dia ahitana WorldPride sy EuroGames izay mitranga amin'ity fararano ity any Danemarka sy Suède.
Hijery ny fifandraisana misy eo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny indostrian'ny fizahantany ny IGLTA.
Copenhagen 2021 dia fotoana iray hahitan'ny indostrian'ny fizahan-tany ny fomba hanampiany ny fitoviana.
Ny mpitsangatsangana sy ny matihanina amin'ny fizahantany manerantany dia afaka manohana ny fifandraisana misy eo amin'ny fisoloana vava sy ny fitsangantsanganana, indrindra mandritra ny Human Rights Forum.
Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa, ny iraisam-pirenena Fikambanana Travel IGLTA + dia hampiroborobo an'i Copenhagen 2021 amin'ny maha mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery tambajotran'orinasa sy mpandraharaha fizahan-tany LGBTQ +, manamafy ny satan'i Copenhagen sy Malmö ho toerana itodiana voalohany amin'ireo mpandeha LGBTQ + ho an'ny 2021 sy ny sisa. Copenhagen 2021 dia mandrakotra ny mpikarakara WorldPride sy EuroGames nitranga tany Danemarka sy Suède tamin'ny volana Aogositra.
Amin'ny maha-lohahevitra lehibe ny zon'olombelona mandritra ny hetsika Copenhagen 2021 rehetra, ny IGLTA dia hampiasa ny fiaraha-miasa ho fotoana iray hijerena ny fifandraisana misy eo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny indostrian'ny fizahantany, indrindra mandritra ny Forum momba ny zon'olombelona.
Ny filohan'ny Copenhagen 2021 Katja Moesgaard dia nilaza hoe: “Vitsy ny vatan'ny LGBTQ + iraisam-pirenena fanta-daza sy hajaina tahaka ny IGLTA ary faly izahay fa nahita ny fotoana tao Copenhagen 2021 WorldPride sy EuroGames mba hampiroboroboana ny tanànantsika ho toerana mahatalanjona ho an'ny LGBTQ + olona, fa koa handinihana ny fomba ahafahan'ny indostrian'ny fitsangantsanganana mandray anjara amin'ny fitoviana.
“Tahaka ny indostria maro, ny sehatry ny fitsangatsanganana dia tratry ny aretina manerantany ary ny fanohanan'ny IGLTA miaraka amin'ny fandaminana tsara sy ny sori-dalanay mankany amin'ny volana Aogositra dia mampiseho fa eo amin'ny làlana tsara isika amin'ny fankalazana WorldPride sy EuroGames miavaka. Matoky izahay fa olona maro no afaka hiaraka aminay amin'ity fahavaratra ity hametraka ny 18 volana farany any aoriana ary hifantoka amin'ny ho avy. ”
Ny filoham-pirenena sy CEO an'ny IGLTA John Tanzella dia nilaza fa: "Faly izahay manohana ny fahitana manerantany momba ny WorldPride sy ny EuroGames, hetsika izay mampivondrona ny mpandeha LGBTQ + manodidina ny kolontsaina, ny fanatanjahantena ary ny fitoviana.
"IGLTA dia mpiara-miasa amin'ny mpampiantrano WorldPride hatramin'ny 2014 - ary mpanohana hatramin'ny nanombohany tany Roma tamin'ny taona 2000 - fa ny firaisankina noforonin'i Copenhagen 2021 dia hisy dikany lehibe kokoa aorian'ny fitokanana be loatra. Manantena ny hizara ny hetsika amin'ireo mpitsangatsangana sy ireo matihanina momba ny fizahan-tany eran'izao tontolo izao izahay ary manasongadina ny fifandraisana misy eo amin'ny fisoloana vava sy ny dia mandritra ny Forum momba ny zon'olombelona.
Ahoana no ahafahan'ny Amerikanina mitsangatsangana tsaratsara kokoa amin'ny tontolo post-pandemie